Profaịlụ ụlọ ọrụ - Sun Master International Limited
SỤgwọ nke ụlọ ọrụ Master International Limitedbụ ụlọ ọrụ na-arụpụta ngwá ụlọ n'èzí. Anyị abụghị naanị ụlọ ọrụ OEM nwere ahụmịhe karịrị afọ 20, mana ụlọ ọrụ mmepụta ihe na-emepe emepe na-ewepụta ihe karịrị ụdị 30 kwa oge. Anyị bụ ọkachamara na rattan wicker, ngwá ụlọ eriri, na arịa ụlọ textilene nwere okpokolo agba aluminom na okpokolo agba nchara jikọtara ya na ụdị ihe dị iche iche dị ka osisi rọba na osisi teak.
Ike anyị kachasị elu bụ arịa ụlọ 8 0,000 kwa ọnwa yana ndị ọrụ 300 nwere ahụmahụ. Anyị nwetara BSCI na ISO 9 0 0 1: 2015 iji nye ndị ahịa anyị ọrụ ka mma.
Anyị na-ejikwa profaịlụ aluminum na ngwá ụlọ dị ka ụlọ ọrụ dum ruo afọ iri. Anyị ebubatala igwe na-apụ apụ, igwe na-edozi anodizing na ngwaọrụ nchọpụta sitere na mba ndị mepere emepe iji nye mma kacha mma. Ike anyị bụ arịa ụlọ 80,000 kwa ọnwa. Site na mbọ nke ndị ọrụ Sun Master na ebumnuche nke "ịdị mma mbụ, onye ahịa mbụ", Sun Master ga-arụkọ ọrụ na ndị enyi si n'akụkụ ụwa niile na-arụ ọrụ dị elu nke ọma na ezi obi.
Onye isi anyị Terry ewerela ọkwa dị iche iche na ụlọ ọrụ mmepụta ihe dị iche iche tupu ọ bụrụ onye isi oche nke Sun Master International Ltd bụ onye na-emepụta ngwá ụlọ n'èzí na imewe na-elekwasị anya na nkwari akụ, okomoko, patio, ojiji nkwekọrịta. A mụrụ ya na Hong Kong wee kwaga Canada na 1988 onye tolitere na Vancouver. Terry gụsịrị akwụkwọ na Mahadum Victoria na BC Canada maka Bachelor of Art nke wetara ya ntọala nwere echiche nke imepụta ngwaahịa ọhụrụ. O nyerela ọtụtụ ndị ahịa ya aka ịmepụta na imepụta ihe ruru 1500+ ụdị ngwá ụlọ dị n'èzí na afọ 18 ọrụ ya na China.
Anyị nghọta kwupụta a ezi imewe pụtara mwekota nke ụtọ na anwụ ngwa ngwa, ọ bụla mpempe anyị ngwá ụlọ bụ ezi ihe atụ nke ya kpọmkwem chọrọ na kasị mma-na kacha mma dị ka ndị ahịa anyị'mkpa. Anyị na ụlọ ọrụ 500 kacha elu na-arụkọ ọrụ maka afọ na-esochi na ahịa na-abụkarị European na United States.
Kwa afọ, a na-emepụta atụmatụ na ụdị ọhụrụ iji meju ihe ndị ahịa anyị chọrọ. Emere ụdị pụrụ iche maka ndị ahịa nwere mmekọrịta ogologo oge na anyị, nke n'aka nke ya na-enye ha ohere ịsọ asọmpi n'ahịa arịa dị n'èzí na mba ha. Ịzụlite mmekọrịta ogologo oge na ndị ahịa anyị na ndị na-azụ ahịa bụ ihe mgbaru ọsọ anyị. Atụmatụ anyị dị mfe bụ ịnọgide na-eguzosi ike n'ezi ihe na ịkwụwa aka ọtọ na ọnụahịa iji nweta ntụkwasị obi.
Ụlọ ọrụ anyị dị na Foshan City, Guangdong, China. Ọ na-ewe nkeji 40 iji gaa ụlọ ọrụ mmepụta ihe site na ọdụ ụgbọ elu Guangzhou Baiyun. A na-anabata gị nke ọma ka ị bịa leta anyị wee hụ obodo Guangzhou mara mma. Anyị nwere obi ụtọ karịa iburu gị n'ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ụlọ ngosi. Ka anyị mepụta ohere dị mma maka gị, maka mụ na ụwa.